Horjoogaha ugu da’da weyn Al-Shabab oo sanado kadib hadlay |
Horjoogaha ugu da’da weyn Al-Shabab oo sanado kadib hadlay
Xili laga itaal roonaaday Maleeshiyada Alshabaab, ayaa waxaa weli soo baxaayo goodin ay Maleeshiyada Alshabaab u goodineyso la dagaalanka Ciidamada DF iyo AMISOM.
Sheekh C/qaadir Muumin oo ka tirsan Saraakiisha sar sare ee Ururka Al Shabaab, ayaa waxa uu wacad ku maray in Maleeshiyada Alshabaab ay sii laba jibaari doonaan la dagaalanka Ciidamada Qaranka iyo kuwa Midowga africa ee AMISOM.
Sheekh C/qaadir Muumin oo badi ku nool Buuraaleyda Galgala, ayaa waxa uu sheegay in Maleeshiyada aan laga itaal roonaan, balse ay ka awood bateen waxa uu ugu yeeray Ciidamada Shisheeye iyo duullaanka ay kaga soo qaaden cir iyo dhul.
Sidoo kale, waxa uu Tilmaamay in duulaanka Dowladaha Reer galbeedka iyo kuwa Africa uu yahay mid saameynaaya ilaa toddobo ka mid ah dalalka Afrika, ha yeeshee ay helayaan taageero caalami ah, si ay u wiiqaan awooda Ururka Al Shabaab, wuxuuna carabka ku dhuftay in Aamusnaanta Kooxdu ay tahay mid lagu dagaayo Nidaam dagaal.
Horjooge C/qaadir Muumin, ayaa waxa uu Dowlada Mareykanka ku eedeeyay in uu hogaanka u haayo gulufka militari ee lagu qaaday goobaha ay ka jooggaan Somaliya, waxa uuna sheegay in arrintaasi aysan galin doonin wax niyad jab ah.
Dhanka kale, Horjoogaha ayaa ku hanjabay inay fulin doonaan Weeraro Taariikhi ku noqon doono Dowladaha Reer Galbeedka, DFS iyo kuwa AMISOM, isagoona sheegay inay is hortaagi doonaan danaha Reer Galbeedka ee dalka Somalia.